Museveni: Askarigii raba inuu gabar dharbaaxo ha aado Soomaaliya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 9, 2019 261 0
Yuweri Museveni madaxweynaha Uganda
Madaxweynaha dalka Uganda baaderiga lagu magacaabo Yuweri Museveni ayaa gef cad oo aan geed loogu soo gamban wuxuu u geystay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah.
Museveni oo ka hor hadlayay saraakiil ka tirsan xukuumadiisa, ayaa soo hadal qaaday dhacdo dhawaan ka dhacday wadanka Uganda, taas oo askari Yugaandhees ah uu ku dharbaaxay haweeney askariyad ah oo katirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaano Tarafiikada.
Muuqaalka askariga Yugandheeska ah oo dharbaaxaya haweeneyda, islamarkaana kuleetiga ku dheggan ayaa ku baahay baraha bulshada, waxaana shacabka wadankaas ay arintan ka muujiyeen caro xoogan, taas oo keentay in Yuweri Museveni uu ka hadlo.
Museveni ayaa wuxuu sheegay in gabar Yugaandhees ah oo lagu dherbaaxo gudaha dalkeeda ay tahay arin weyn oo uu qofkii geystay ku muteusan karo in maxkamad lasoo taago.
Arinta la yaabka leh waxay tahay in Yuweri Museveni uu baaq u diray ciidamadiisa, kaasoo oo ah in askariga doonaya inuu gabar dharbaaxo ay fursad u ahayaan.
Fursaddu waxay tahay sida uu sheegay in askarigaasi loo diro Soomaaliya oo uu ku tilmaamay wadan looga baahan yahay in gabdhaha la dharbaaxo.
Ciidanka Uganda ayaa gabdho badan ku kufsaday Soomaaliya, waxaana warbixinno ay soo saareen hey’adaha xuquuqda aadanaha sheegtay dhowr jeer lagu soo bandhigay dhibaatooyin dhanka jinsiga ah oo ay ku keceen.
Hadalka Yuweri Museveni, madaxweynaha Uganda wuxuu muujinayaa cadaawadda fog ee uu u hayo shacabka Soomaaliyeed, waxaana Soomaaliya jooga kumanaan askari oo ka socda dalkiisa, kuwaas oo xad gudubyo kala duwan u geysta dadka maatida ah.
Dadka qaar ayaa aaminsan in Museveni uu hadalkan ku dhiiraday kadib markii uu arkay raggii Soomaaliyeed intooda badan oo aanan ka qiirooneyn kufsiga iyo dhibaatooyinka hortooda loogu geysanayo gabdhaha walaalahood ah.
Hadalkan ma ahan mid qoraal ah ee waa muuqaal, wuxuuna si cad bannaanka usoo dhigayaa heerka ay taagan yihiin wadaadaha Dowladda u fatwooda kuwaasoo askarta Uganda iyo kuwa lamidka ah ka aamisan iney yihiin ciidan nabad ilaalin ah oo Soomaalida sharafkeeda difaacaya.
Halkan ka dhagayso Warbixin ku saabsan hadalka Yuweri Museveni ee xadgudubka ku ah dadka Soomaaliyeed.